Wararkii ugu dambeeyay Xaaladda Kismaayo – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAWararkii ugu dambeeyay Xaaladda Kismaayo
October 28, 2018 Abdirahman Al-cadaala WARARKA MAANTA Comments Off on Wararkii ugu dambeeyay Xaaladda Kismaayo
Xaaladda magaalada Kismaayo ayaa deggan maanta, kadib markii shalay gelinkii dambe uu iska hor imaad dhex maray ciidamo ka wada tirsan maamulka Jubbaland.
Iska hor-imaadkaasi ayaa waxa uu sababay dhimasho iyo dhaawac, waxaana ciidamada Ammaanka Jubbaland u suurtagashay in ay gacanta ku dhiggaan Koox hubeysan.
Ciidamada Booliska maamulka Jubbaland ayaa Saaka howlgallo ka wadda Xaafadaha ee ay ka kooban tahay Magaalada Kismaayo.
Howlgallada ayaa Magaalada looga saraya Koox hubeysan oo maalmihii lasoo dhaafay falal lidi ku ah Ammaanka ka waday magaalada Kismaayo.
Kooxda Shalay dagaal ka dib gacanta lagu dhigay ayaa kasoo horjeeday madaxweynaha Jubbaland, waxaana dhowr jeer oo laysgu dayay dhexdhexaadin lagu guuldareystay, waxaana xusid mudan in ay dileen nabaddoonkii waday dhexdhexaadinta.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa amar ku bixiyay in Magaalada laga ciribtiro Kooxaha hubeysan ee aan aheyn Ciidanka jubbaland.
Weerar dad badan lagu dilay oo Mareykanka ka dhacay
Madaxweyne Farmaajo oo shir isugu yeeray Madaxda Dowlad Goboleedyada
717,269 total views, 2,567 views today
717,269 total views, 2,567 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
717,145 total views, 2,568 views today
717,145 total views, 2,568 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
717,174 total views, 2,567 views today
717,174 total views, 2,567 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
717,238 total views, 2,567 views today
717,238 total views, 2,567 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
717,293 total views, 2,568 views today
717,293 total views, 2,568 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]